Carvajal oo khamiista ogaanaya ganaaxiisa UEFA…. – Gool FM
Carvajal oo khamiista ogaanaya ganaaxiisa UEFA….
Kaafi December 7, 2017
(Paris) 07 Dis 2017. Khamiista , Dani Carvajal waxa uu ogaan doonaa in laga ganaaxay lugta kowaad ee wareegga 16 Champions League-ga kaddib markii uu si kas ah diiwaanka garsooraha ku galay ciyaartii APOEL.
Kaddib markii uu daahiyey gacan tuur (Fooro gacan) kulankii Cypriots, dadabka middig waxaa loo diiwan galiyey huruudigiisii saddexaad ee Group-yada taas oo ka dhiggan in uu seegay ciyaartii Borussia Dortmund si uu nadiif ugu ahaado wareegga 16ka.
Hase ahaatee, UEFA gal ayey ka furtay kiiskiisa kaddib markii ay xaaladda daristay waxa ay ka arinsaneysaa in kulanka kale ku daraan ciqaabta.
Warbixinta wafdiga wey caddahay waxaana goor dhaw fariisan doona fudiga anshaxa ee UEFA (UEFA’s Disciplinary Committee) go’aanna wey soo saari doonan.
GOOGOOSKA: Rijeka vs AC Milan 2-0
Hadaad ogaato sida uu Ronaldo ku tagay Paris SHAKI yar xittaa kaa gali maayo in isaga uun la caleemo saari doono caawa!